मदन भण्डारीका हत्यारा किन खोज्दैनन् विद्या र केपी ? - Sainokhabar
होमपेज / अन्तराष्ट्रिय समाचार / मदन भण्डारीका हत्यारा किन खोज्दैनन् विद्या र केपी ?
तस्बिर : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, आफ्नो पति स्व.मदन भण्डारीका साथ
काठमाडौं/ जेठ दुई गते क्यालेण्डर हेर्दा जेठ दुई देख्ना साथ संझे मैले उनै नेपाली भुमीका महान जननेता मदन भण्डारीलाई। त्यतिवेला म जहाँ थिएँ, त्यहीबाट तत्काल उठेर एक मिनेट मौन धारण गरेँ उनको आत्माको चिर शान्तिको लागि। भोली जेठ तिन गते उनको हत्या भएको दिन।
उनी देशको मुहार फेर्ने खाका र राष्ट्रियताका सवालमा वैचारिक रुपमा सुस्पष्ट थिए। एमालेको महासचिव रहेकै बेला तिनै अद्भुत नेताको रहस्यमय हत्या भएको आज २३ बर्ष भईसक्यो। वि.सं. २०५० साल जेठ ३ गते चितवनको दासढुङगामा जिप दुर्घटनामा परी उनको निधन भएको थियो। तर त्यो दुर्घटनालाई भने रहस्यमय र मदन भण्डारीको हत्या योजना अनुरुप भएको मानिएको छ। दुर्घटनामा मदनसंगै रहेका एमालेका संगठन विभाग प्रमुख जिवराज आश्रितको पनि निधन भएको थियो। तर जिपका चालक अमर लामा भने दुर्घटनामा परेर पनि जिवितै फर्किन सफल भए।